Tsy mahazo miditra eto ireo avy any Italia, Korea Atsimo, Iran: nakatona ny sisin-tany malagasy noho ny fihanaky ny Coronavirus | NewsMada
Par Taratra sur 29/02/2020
Noho ny fihanak’ilay tsimokaretina coronavirus haingana dia haingana any amin’ireo firenena ivelan’i Sina, namoaka fanambarana ny minisiteran’ny Fahasalamana, mandrara ny fidiran’ireo mpizahatany avy any Italia, Korea Atsimo, Iran… eto Madagasikara. Noho ny hamehana, hampiharina maika sy eo no ho eo izao fanapahan-kevitra izao.
Namoaka fanambarana ofisialy ny minisiteran’ny Fahasalamana, manoloana ny fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus, niainga avy any Sina ary mihanaka any amin’ny firenen-kafa, toa an’i Korea Atsimo, Italia, Iran, sns. Araka izany, mikatona ny habakabaka sy ny sisin-tanin’i Madagasikara ho an’ireo firenena voatanisa ireo.
Ho an’i Madagasikara, anisan’ny tena arahi-maso akaiky ny any Italia, ahina ny mety hahatongavan’ity tsimokaretina ity aty amintsika. Anankiroa ny kaompania italiana, ny Neos sy ny Blue Panorama, tonga mivantana avy any Italia (Milan, Verone, Roma) sy avy any Varsovia Polona mankany Nosy Be. Efa nihantona nanomboka ny volana janoary ireo zotra ireo noho ny antony ara-barotra, ka tokony hiverina indray manomboka amin’ny 7 avrily 2020 ho avy izao. Mety hisy kaompania italiana hafa koa hitondra mpandeha avy any Italia, saingy sarotra ny hanarahana ny mombamomba ireo mpandeha, satria malalaka ny fivezivezena any amin’ireo firenena ao anatin’ny Vondrona eoropeanina. Eo koa ireo sambo vaventy mpitondra mpizahatany mankaty Madagasikara.
Foanana na ahemotra ny famandrihana
Voalaza ao anatin’ny fanambarana koa fa mila foanana na ahemotr’ireo orinasa mpikarakara mpizahatany (Agences de voyage) ny famandrihana ataon’ireo mpandeha. Tsy afaka mankaty Madagasikara koa ny mpandeha avy any Italia, Korea Atsimo, Iran. Tsy azon’ireo kaompania anabakabaka rehetra atao koa ny mitondra mpandeha avy any amin’ireo firenena ireo mankaty Madagasikara tato anatin’ny 14 andro farany. Tsy afaka mihazo an’i Madagasikara koa ny mpandeha an-tsambo, nivahiny na avy any Italia, Korea Atsimo, Iran.
Miova arakaraka ny fivoaran’ny tsimokaretina Cornavirus ity fepetra ity, mifanaraka amin’ny toromariky ny Fikambanana iraisam-pirenena mikasika nyfahasalamana (OMS). Tsiahivina fa efa voarara koa ny fivezivezena anabakabaka amin’i Sina.